Koofiyadaha clothing Dharka xayaysiiska ah • farshaxanka P&M ee kumbuyuutarka lagu farsameeyo
Koofiyadaha xayeysiinta waa soo jeedin xiiso leh oo loogu talagalay dharka shaqada iyo dharka xayeysiinta, waxay noqon doonaan isku dhafan isku xiran Funaanado, funaanadaha polo ama tosho. Waa dalab loogu talagalay carruurta, dhalinyarada iyo dadka waaweyn.
Koofiyadaha waa aalad xayeysiis caan ah, oo ay weheliso sawir gacmeedyo shaqsiyeed, badanaa hadiyad ayey u yihiin macaamiisha iyo qandaraasleyda. Qalabkan noocan ahi ma aha oo kaliya wax ku ool ah, laakiin sidoo kale wuxuu noqon karaa mid dhexdhexaad ah oo xayeysiis ah, taas oo kordhinaysa caan ka qaadista astaanta. Hadiyad waxtar leh ayaa hubaal ka dhigeysa urur wanaagsan isla markaana, natiijada, waxay sidoo kale kordhin kartaa xiisaha shirkadda.
Dukaankayaga waxaad ka heli doontaa noocyo badan oo xijaab ah, xagaaga iyo jiilaalka labadaba. Koofiyadaha baseball ee leh muuqaal, koofiyado jilicsan oo leh gees, muuqaallo, garbasaarro, sidoo kale koofiyado dahaadhan, hubaal waxaad ka heli doontaa wax adiga kugu habboon.
Waxaan haynaa moodello iyo moodello caalami ah oo loogu talagalay carruurta cabirradooda ka yar yihiin.
Naqshadeynta koofiyadda shaqsiga
Sida dharka iyo dharka intabadan dukaankayaga, koofiyadaha waxaa lagu calaamadin karaa wax sawiro ama qoraalo ah. Waxaan sameynaa qurxin iyadoo la adeegsanayo habka daabacaadda kumbuyuutarka ama daabacaadda shaashadda. Tan awgeed, waxaan marka hore u baahanahay xigasho
bixinta sawirada iyo cadeynta xaddiga wareegga ee calaamadeynta,
iyada oo ku saleysan sawirada la helay, waxaan sameyneynaa muuqaal,
ka dib markaan aqbalno muuqaalka - waxaan bilaabaynaa calaamadeynta.
Waxaan leenahay baarkinka mashiinka noo gaar ah, kaas oo noo sahlaya inaan si dhakhso leh u dhammaystirno amarka, illaa 7 maalmood oo shaqo laga bilaabo xilliga lacag bixinta la xisaabiyo. Waxaan la soconaa habka wax soo saarka calaamadeynta marxalad kasta, taas oo aan ugu mahadcelineyno taas oo aan awoodno inaan si dhaqso leh uga falcelino haddii ay dhacdo wax isbeddelo ah. Inaad xiriir joogto ah la leedihiin macmiilka, waxaan si dhakhso ah u adeegsan karnaa wixii sixitaan ah.
Fikradaha wanaagsan iyo koox sii kordheysa ee macaamiisha joogtada ah waxay xaqiijinayaan tayada sare ee wax soo saarka iyo adeegyada. Ku qanacsanaanta macaamilku aad ayey muhiim noogu tahay, sidaa darteed waxaan ula timaadnaa amar kasta si taxaddar weyn leh.
Qiimeynta degdegga ah
Codsashada sawirada shaqsiyadeed ee koofiyadaha xayeysiinta waxay u baahan tahay qiimeyn shaqsiyeed. Waxaa lagu amrayaa xulashada habka calaamadeynta, heerka kakanaanta mashruuca iyo dadaalka loo baahan yahay. Kharashka amarka waa la ogaan karaa ka hor intaanay shaqadu bilaaban, qiimayntu waa bilaash waxbana kuguma khasbi doono. Kooxdayadu waxay kugula talin doonaan goobta calaamadeynta, xulashada badeecada saxda ah ee habka la xushay, iyo mahad sanado badan oo waayo-aragnimo ah, waxay sidoo kale ka jawaabi doonaan su'aalahan aan caadiga ahayn.
koofiyadaha allegro oo daabacandabool suuf ah oo daabacankoofiyado socda oo daabacankoofiyadaha shirkadda oo daabacankoofiyadaha koofiyadaha buuxa leh oo aad adigu iska leedahayKoofiyadaha kuugga leh daabacankoofiyado si gaar ah loo sameeyay oo daabacandabool waraaqo daabacankoofiyadaha dhogorta leh daabacankoofiyadaha xayeysiinta oo daabacankoofiyadaha snapbackback oo leh shaashadaadakoofiyadaha isboortiga oo leh daabacanKoofiyadaha baseball ee carruurta oo leh daabackoofiyadaha baseball oo daabacankoofiyadaha baseball ee ragga oo leh daabackoofiyadaha baseball oo daabacankoofiyadaha baseball oo leh daabacaad kuu gaar ahkoofiyado daabacankoofiyado leh imprinti imprinkoofiyado daabacan oo loogu talagalay carruurtakoofiyado leh daabacaadda KrakowKoofiyadaha leh daabacaad saaxir ahkoofiyado leh daabacaadda marijuanakoofiyado caado-daabacankoofiyado leh daabacaadda 'poznań'koofiyado la daabacay Warsawkoofiyado leh daabacaad visor ahkoofiyadaha daabacan ee jiilaalkakoofiyado leh daabacaaddaadakoofiyado leh daabacaad kuu gaar ahkoofiyado leh astaamohooda u gaarka ahdaboolida doonta leh daabacaaddaadaKoofiyado leh sawirkaaga Warsawkoofiyadaha jiilaalka ragga oo daabacankoofiyadaha jiilaalka oo daabacankoofiyadaha jiilaalka oo leh calaamadda 'esro'koofiyadaha jiilaalka oo leh daabacaad khaas ahkoofiyadaha jiilaalka oo leh daabacaad kuu gaar ahkoofiyadaha jiilaalka oo leh astaan ​​u gaar ah allegroT-shaati iyo koofiyad daabacan